Foto ọhụrụ dị ndụ nke OnePlus 7T Pro agbaala leaked | Gam akporosis
Foto ndị dị ọhụrụ nke OnePlus 7T Pro agbapụla
Na-apụta foto nke ọzọ OnePlus flagship, nke ga-abata na-etolite a atọ na abụọ ugbua mara, ndị bụ ndị OnePlus 7 y 7 Pro. Emeputara ha na etiti onwa Mee, ubochi nke dika ihe dika onwa ato site na ubochi ugbua, n’oge na adighi anya ha ga anabatakwa nwanne ha nwoke nke okenye, onye gha abia n’iji oru ya dikwa mma.
Kpọmkwem, Anyị na-ezo aka na ohere ọhụụ a na OnePlus 7T Pro. Ngwaọrụ a ga - abụ ọkwa ọrụ n’afọ a, ma ọ bụrụ na ụlọ ọrụ ahụ na - agbaso otu ụdị ihe ahụ ejiri rụọ ụdị “T” ya nke usoro ndị gara aga. Ọktọba ga-abụ ọnwa nke anyị ji amata ya, mana, ka anyị na-eche ka ọ bịarute, anyị nwere ike ịmatakwu ihe ọ na-echere anyị maka foto ọhụụ ọhụrụ nke ya apụtawo.
E gosipụtara OnePlus 7T Pro nke oge a site na foto ya nke nchekwa nchekwa. Ihe kpatara eji eyi ya nwere ike ịbụ maka izobe nke aesthetics ya. Otú ọ dị, na foto nke atọ anyị kwụgidere n'okpuru, anyị nwere ike ịghọta ntakịrị ihe n'azụ ya, nke mejupụtara sistemụ igwefoto azụ, ọkụ ọkụ ọkụ, dịka nke OnePlus 7 Pro.
Enweghị ihe akaebe doro anya iji gosi na ekwentị ahụ egosiri n’elu bụ n’ezie onye ama ama OnePlus 7T Pro. ihe fọrọ nke nta ka ọ dị ka ụdị akwụkwọ ndụ Nebula nke OnePlus 7 Pro smartphone. Nanị nnukwu ihe dị iche na imewe n'etiti ekwentị abụọ ahụ bụ na ekwuru OnePlus 7T Pro na-ekwu okwu karịa.
Cheta na OnePlus 7 Pro na-abịa na ihu igwe 6.67 nke anụ ọhịa AMOLED nwere mkpebi QuadHD + nke pikselụ 3.120 x 1.440 (516 dpi), akụkụ 19.5: 9, Corning Gorilla Glass na 90 Hz ume ọhụrụ, yana yana a Snapdragon 855, 6/8/12 GB, 128/256 GB nke ebe nchekwa dị n'ime ya na batrị ikike 4,000 mAh na nkwado maka ịkwụ ụgwọ ngwa ngwa. Site n'ebe ahụ, anyị nwere ike ịtụ anya ụfọdụ ndozi na OnePlus 7T Pro, yanakwa na ngalaba foto ya na ihe ndị ọzọ.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Noticias » Foto ndị dị ọhụrụ nke OnePlus 7T Pro agbapụla
Twitter maka gam akporo ga-enye gị ohere imechi ọkwa
Lenovo Z6 Pro mechara banye na Europe, yana iji asọmpi asọmpi